I-Mi Casa Su Casa-Ipholile, iBright & ne-Airy Beach House
I-Mi Casa Su Casa-A I-Cozy, iBright & Airy indlu yaselwandle eya kuziva ngathi usekhaya lakho kude nekhaya
2 amagumbi okulala-uKumkanikazi kwigumbi ngalinye-umqamelo, ilinen & iidoonas zinikezelwe
Igumbi lokuphumla elineziqhekeza ezi-2
Itheyibhile yokutyela yeBar-Style & neZitulo
Iifeni zeCeiling kumagumbi okulala kunye negumbi lokuphumla
Igumbi lokuhlambela langoku elinebhafu/ishawari & netoilet-towels zinikezelwe
Umatshini wokuvasa uMthwalo wangaphambili
HAYI Izilwanyana zasekhaya zivumelekile
Ukubhukisha kokwenzelwa iindwendwe ezi-4 KUPHELA
Eli khaya lisanda kulungiswa igumbi lokulala eli-2 lihonjiswe kakuhle kuyo yonke ifanitshala esemgangathweni kunye nezinto zokufakelwa. Indawo yokuphumla ephangaleleyo inegumbi lokuphumla elineziqhekeza ezi-2 kunye ne-65” Smart TV. I-WiFi yoncedo iyafumaneka. Izihluzo zokukhanya kwendalo kwiifestile ezinkulu kwigumbi lokuphumla kunye namagumbi okulala. I-Blockout roller blinds ifakwe kwifestile nganye ukunika ubumfihlo. Iifeni zeCeiling zifakwe kwigumbi lokuphumla kunye negumbi ngalinye lokulala. Ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo linefriji egcweleyo, ioveni yemicrowave, ioveni kunye neepleyiti ezishushu. Itafile ye "bar style" yanamhlanje yabantu aba-4 ibekwe kwindawo yekhitshi. Igumbi lokulala ngalinye linebhedi yokumkanikazi enelinen, imiqamelo kunye needoona ezibonelelweyo. Igumbi lokulala eliphambili lineengcango zaseFransi ezivula kumgangatho ongaphambili-indawo efanelekileyo yokubukela ukuphuma kwelanga. Igumbi lokuhlambela linebhafu / ishawa kunye nendlu yangasese eneetawuli zokuhlambela nazo. Zombini iingcango zangaphambili nezasemva zifakelwe ucango lwesikrini olutshixwayo ukuvumela umoya opholileyo wolwandle ukuba uqukuqele endlwini. Indawo evulekileyo yangaphandle enegumbi lokuphumla elitofotofo / indawo yokutyela yangaphandle. Indawo yokuhlamba eyahlukileyo inomatshini wokuvasa umthwalo ongaphambili kunye nezixhobo zoku-ayina ezinocingo olujikelezayo kwigadi engasemva. Indawo yokupaka i-Undercover iyafumaneka kunye neyongeziweyo yokupaka ezitalatweni kwiimoto ezi-2 ezongezelelweyo. Ishedi yegadi encinci iyafumaneka ukuze igcinwe.
Iitawuli zaselwandle, iambrela kunye nengubo zinikiwe - nangona AKUKHO izixhobo zokurhweba emanzini (esi yingxelo emiselwe kwangaphambili ka-Airbnb “kuluhlu lwezinto eziluncedo ezongezelelekileyo‘izinto ezikhethekileyo’ kwaye azinakushenxiswa - uxolo ngako nakuphi na ukubhideka)
Ukhetho oluncinci lweTea, iibhegi zeKofi, iShukela kunye nobisi oluncinci lweLong Life (kwifriji) lunikezelwa ukuba ujabulele. Ukongezelela, ityuwa, i-pepper kunye neoli yokupheka ifakwe kwi-drawer phantsi kwe-microwave.
IHarrington yindawo entle yolwandle kunye nedolophu esecaleni komlambo eneelwandle ezintle zokusefa kunye neendawo zokuqubha echibini ezilungele iintsapho.
IHarrington ime kumlomo woMlambo iManning kwaye ibonelela ngayo yonke into umntu ohamba ngesikhephe kunye nokuloba angathanda ukuyinqwenela - iirempu zamaphenyane ziyafumaneka eHarrington (5 min drive) okanye iCrowdy Head (15 min drive).
Abathandi bendalo abayi kudana ngeCrowdy Head National Park emnyango wakho kunye neengoma ezimangalisayo zokuhamba.
Ukuba ungumdlali wegalufa-iHarrington Waters Golf Club lilitye elifihliweyo kwiNtlambo yaseManning. Ilinganiswe njengenye yezifundo ezingama-25 ezinkulu zemingxuma ezili-9 eOstreliya. Ineendidi ezili-18 ezahlukeneyo kwaye inomlinganiselo wePar 72
Nceda ungalibazisi ukuqhakamshelana nam ukuba ufuna naluphi na ulwazi oluthe vetshe, ndonwabile ukukunceda ngayo nayiphi na imibuzo onokuba unayo.
Ngelishwa, emva kwe-11.00pm nangaphambi kwe-6.00am ixesha lam lokuphendula linokulibaziseka. Nceda wamkele uxolo lwam olungazenzisiyo ukuba oku kubangela ukuphazamiseka.
Ngelishwa, emva kwe-11…
Inombolo yomthetho: PID-STRA-27364